Ukuphupha malunga ne-rattle Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Enye into, kukungxola sisixhobo somculo nje esivelisayo nesingxolayo xa sishukunyiswa. Kwelinye icala, ukukhala kunokufumaneka kwindawo yeethoyi zabantwana kunye nabantwana abancinci.
Zombini ezi zinto zahlukileyo zinento efanayo yokuba ukukhonkotha kuhlala kubandakanya isikhongozeli esiqhotyoshelwe kwisiphatho, esidla ngokufana nebhola. Esi sikhongozeli sigcwele amatye amancinci okanye iingqalutye, iimbewu, okanye ezinye izinto ezincinci ezenza ingxolo xa usiwa umva. Iitoni ezikhutshiweyo ziphezulu kwaye zimfutshane kwaye zihlala zikwisandi esifanayo.
Ukongeza kwimigqomo, abantu bemveli basebenzise kwaye bayaqhubeka nokusetyenziswa ngabantu bomthonyama kwiminyhadala. Ezi ngxolo zirhabaxa kufuneka zixhase inkqubo yokuphilisa kwimeko yokugula. Kodwa unokufumana ukukhwaza kubukumkani bezilwanyana. Masithathe inyoka eyinyoka njengomzekelo.
Kwinqanaba eliqhelekileyo lokuhlalutya iphupha, uphawu lwephupha "ukukhwaza" lunokusetyenziswa njenge ukululeka ukuba iqondwe. Ukuphupha akufuneki kumamele ingqondo yakho kuphela, kodwa ikwathembele kwimvakalelo yakho kunye neemvakalelo zakho. Kungenxa yokuba ezinye izigqibo, zilunge ngakumbi njengoncedo lwezigqibo kunokuba zinengqiqo.
Ibonwa njengeyona nto yokudlala, i-rattle inokuyibetha ukhetho kwaye ubhekise kumathuba ekufuneka esetyenziselwe ukuphucula ubuntu bakho. Umntu ochaphazelekayo akufuneki abadlulise ngokungakhathali. Olu toliko lunokusetyenziswa xa abantwana bedlala neerhorhoni ebuthongweni babo.
Ukuba umntwana udlala ngokungxola kwakhe ephupheni, oku kunokuba, ngokwenkcazo ngokubanzi yephupha, njenge uphawu oluhle Makuqwalaselwe. Kuya kubakho umzuzu woxolo losapho ngaphambili. Amashishini amashishini nawo aya kukhula kakuhle. Nangona kunjalo, isilumkiso siyacetyiswa ukuba unika umntwana omncinci ukukhala ngokwakho. Ngenxa yokuba ezinye iimali-mali mhlawumbi aziyi kuhlawula.
Ukuba umntu olele ngempazamo uphule i-rattle okanye i-ratchet ephupheni lakhe, uvumelekile ukuba enze njalo ezintle Jonga kwikamva. Ujongene nentuthuko kunye nokuphumelela kwinqanaba labucala okanye lobungcali. Ukuthenga urhwaphilizo oluqhelekileyo kuhlala kukhuthaza inkxalabo ngeemfuno zakho kwaye ufuna ukuba ungathanda ukukufezekisa.
Ukuba umntu ujonga "ukurhabaxa" komfanekiso wephupha ngokwembono yengqondo, kunokugqitywa ukuba ngasemva kwayo kuhlala kungumnqweno wamaphupha omnye. ukuphiliswa ngokomoya zifihliwe. Umntu ochaphazelekayo mhlawumbi ukwimeko yokungalingani kwaye ulangazelela imeko yemvisiswano yangaphakathi.
Ukuba ukukhwaza kubonakala ngathi sisixhobo somculo ephupheni, ungasalatha Ubomi bemvakalelo Ndihambise umntu oleleyo. Nokuba oku kulungeleleneyo kunokubonwa kwingoma edlalayo, uncuthu lwengoma, okanye isingqisho. Ke ngoko, oku kufuneka kuthathelwe ingqalelo ngakumbi kuyilo.
Abo benza umculo ngengxolo kunye namagubu emaphupheni abo bahlala bejonga indlela yokuziqhelanisa kunye neemfuno zabo zokuvuka ebomini. Ukubonakalisa. Nokuba ucula okanye udanisa umculo onjalo ephupheni, oku kungabonisa ukuba ufuna ukwabelana nabanye ngeemvakalelo zakho.
Ukuthetha ngokwasemoyeni, ukurhabaxa kunokubonwa njengophawu lwephupha kwi umthamo Jongisa umphuphi ukutsala umdla wabanye. Nangona kunjalo, akufuneki ubaxwe, kuba ekuhambeni kwexesha le ngqwalaselo ihlala ikhathaza okanye yoyikisa.
Ukuba ukukhwaza kwephupha kwenza ingxolo enganyamezelekiyo, kubonisa njengomfanekiso wephupha umqobo onokufumaneka ephupheni ngokwalo.